QAAB-DHISMKA JIMCAHA IYO GUDBINTA JIMCAHA EE GERMAN, Casharo Jarmal ah oo Fudud
SETUP SENTENCE SERUP, GARGAARKA JAMHUURIYADA GERMAN, JAMHUURIYADA GERMAN. BARO INAAN SAMEYNno XUKUN JARMAL. ASXAABTA QAALIGA AH, AAN KA HELI DOONO AASAASIYO AAN KA LEEYAHAY XUKUNKA DARSIGA JARMALKA. SI taxadar leh ula soco.
KOOXDEENA KOWAAD EE JARMALKA WUXUU BAXAY! QOF WALBA WUXUU BARAN KARAA JARMALKA SI FUDUD!
GUJI MUUQAALKA BUUGGA WAXBARASHADA Jermalka
Feejignaan: Si aad si buuxda ugu fahamto tan iyo mowduucyada lagu sharxi doono hadda kadib, waa inaad aqoon ku filan u leedahay maadooyinka Naxwaha Turkiga.
Haddii aad hayso macluumaad ku saabsan jumladaha iyo walxaha ee naxwaha Turkiga, waa inaad tagtaa waqti gaaban.
Waxaan tixgelineynaa jumlado ka kooban mawduuc iyo aalado sida jumlado fudud.
Waxay akhrin doonaan.
Jumladoodu waa qaab-dhismeedyo xukun oo aad u fudud. Haddii fiiro gaar ah loo yeesho, iswaafajinta maaddada-falalka ayaa lagu arkay dhammaan saddexda weedhood ee kor ku xusan.
Nidaamka isweydaarsiga mawduuca waa mid muhiim u ah jumlado sax ah oo macno leh.
Haddii mawduuca iyo ficilku ku jaan qaadi waayaan weedh, weedhaas ayaa jaban oo aan macno lahayn Aynu baaro tusaalooyinka,
Waan tegi doonaa.
Jumladdu waa weedho jaban. Sababtoo ah weedhahan, ficillada iskuma xidhayaan iyadoo loo eegayo mawduuca oo waxaa soo baxay ismaandhaaf maaddo ah.
Tusaale ahaan, xukunka musuqmaasuqa ah "Waan tegi doonaa id waa in loo habeeyo sida ku xusan mowduuca," Waan tegayaa "ama rarka, yükleme Way bixi doonaan".
Hagaag, maadama maadada iyo ficilku ay had iyo jeer waafajin karaan jumlad, markaa waxaan fikrad kaheli karnaa mowduuca xukunka kaliya anagoo fiirineyna falka xukunka.
Aan hoos ku qorno tusaalooyin yar:
Waxaan soo socda.
Waxaad soo qoray.
Waxay ku qoray.
Waxaad soo socota tahay.
Qaado dhowr weedho oo kore.
Weedha "Waxaan imanayaa yapan, qofka qabanaya shaqada (maaddada) waxaa si fudud loo fahmaa inuu yahay birinci I olan.
Mawduuca xukunkii aad qortay "waa" gibi sidaad u fahmi karto.
Mawduuca acak ay qori doonaan üm waa "iyaga ..
Mawduuca ku jira Waad imaan doontaa ”ayaa ah adiga adiga ..
Dabcan, waxaan ogaan karnaa mawduuca jumladahan adoo eegaya balanqaadka xukunka.
Fikradaha miyay noo sheegaan kaliya mawduuca xukunka?
Fikradaha sidoo kale waxay na siiyaan macluumaad ku saabsan mawduuca xukunka, marka shaqada la qabto, qaabka iyo habka xukunka.
Fikradaha waxay abuurayaan jaangooynka jumlada iyo qaabka aan la shaacin ee ficilada waxaa loo yaqaana kuwa aan baqdin lahayn.
Erayada aan dhammays tirnayn ee turkigu waa -mek ama -mak.
Afka Jarmalka, dab-ka-gadaal la'aanta aan dhammaad lahayn ayaa ah -in iyo mararka qaar -n.
Haatan waxan is barbardhigaa ficilada labada luuqadood si aan u fahanno xaaladda.
U dhiganta turkiga ee falka spielen waa inuu ciyaaro. Labada ficilba waa qaab aan dhammaystirnayn.
ciyaar - mak
Sida la arki karo, sida ku xusan falladaha kor ku xusan, dab-ka-qorista aan dhammaadka lahayn ayaa ugu badan oo ku jirta Jarmalka, makna waa Turkiga.
Haddii falka aan dhameystirneyn ee ficilka aan la tirtirin, ereyga soo hadhay waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay asalka fiilada.
Marka qofka ama nuxurka lagu daro ficil ahaan, suunka ciriiriga ah ayaa la tuuraa, qofka, saacadaha iwm ayaa la keenaa asal ahaanta falka.
Aynu sharraxo tusaale ahaan.
Waxaan u qaadanaa falka gabalka ah ee xarafka ah in la akhristo waxaanna leenahay ereyga “aqri kalıy. Aynu soo qaadanno dabiibka qofka keligiis ah iyo qaddarka hadda jirta.
akhri - yor - um
Haatan waxan sharraxeynaa lifaaqyada aan u soo qaadnay falkan.
akhri: asalka fiilada
yor: waqtiga ku-xirnaanta
Um: 1. shaqsi dheeraad ah
Haatan waxan qaadanno tallaalo dheeraad ah:
AKHRISO - TOR - SUN
AKHRISO - DU - N
AKHRISO - YOR - UZ
AKHRISO - DU - K
Aynu qodob ka dhigno halkan. Tusaale ahaan u soo qaado falalka aan aqrino ee aan aqrino.
1 labadaba. inkastoo ay yihiin dad badan, sababta ay u heleen lifaaqa qof ee kala duwan?
Xaaladdaani waxay la xiriirtaa qaab dhismeedka naxwe ahaan waxaana u sabab ah xilliyada kala duwan ee la isticmaalay. Ficillada Jarmalku sidoo kale waxay leeyihiin isku dhejisyo kala duwan iyadoo loo eegayo waqtiyo iyo dad kala duwan.
Sida luqadeena oo kale ah, dabeetiga xaraf ee Jarmalku waa laga saaraa dabada waa la bixiyaa asalka falku.
Aan ficil u qaadno Jarmal:
Waxaan ku dhejin karnaa qallafsanaan la'aan lerne erayga ayaa weli ah.
Hadda taas lerne Aan keenno qof iyo waqti ku lifaaqan ereyga. Aynu keenno qofka shakhsiga ah iyo lifaaqyada hadda.
Lern - e: Baro - bogsii - um
Sida aad arki karto, kaliya falka dhammaystirka ah ee labaduba waa labaduba iyo 1. qof shakhsi ah ayaa macne u bixiyey.
Lern - t: Baro - wanaag - kaaga
Lern - te: Baro - di - m
Waxaan ku siinay isku xidhka dhawr shaqal kor. Mustaqbalka, waxaan si fiican u baran doonnaa lifaaqyada loo keenay ficillada marka loo eego xilliyada.
Haatan waxan fiiro gaar ah u yeelnaa hal dhibic kale.
Sidaad u jeeddo, waxaan ka saarnay magacyada shaqsiyaadka aan dhammaadka lahayn ee shaqalka ah waxaanna isku dubbariday falka annagoo ku darin kuubbanayaal xagga falka haray. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo inta badan shaqallada Jarmalku ay sidan isugu xiran yihiin, haddana waxaa jira ku dhowaad 200 oo fal oo aan caadi ahayn oo aan raacayn sharcigan.
Haddii asalka ficilku uusan isbeddelayn marka falku isku mid yahay, falkan waxaa loo yaqaan 'Verb Verb.
Laakiin haddii fiilka ficilku isbeddelo inta lagu jiro xuddunta, waxaa loo yaqaan 'Verbevs Irregular'.
Fikradaha joogtada ah waxaa mararka qaarkood la yidhaahdaa ficilada Weak iyo ficillo aan caadi ahayn waxaa mararka qaarkood loo yaqaannaa ficillo adag.
Sideen ku ogaan karnaa haddii falka ficilku isbedelo?
Si aad uga jawaabto su'aashan, waa inaad ku qortaa dhammaan ficillo aan caadi ahayn.
Marxaladan waxaad ku bilaabi kartaa adiga oo xusuusinaya kaliya kuwa ugu badan ee loo isticmaalo nolol maalmeedka.
Laakiin aan u sheegno si gaar ah in aynaan lahayn wax doorasho ah laakiin aan ku xusno ficiladan iyo isku-xidhnaanta!
WAA MAXAY TAAGEERADA SHARCIGA JARMALKA?
Waxaa jira fikrad gacan qabe ah oo af Jarmal ah. Falalka kaabayaasha ah waxay ku shaqeeyaan hawlo kala duwan jumladaha. Asal ahaan, waxaa jira 3 ficil gargaar oo Jarmal ah. Kuwani waa shaqallada kaaliyaha ah sein - haben - werden. Ficilladan kaabayaashu ma lahan turkiyo u dhigma isla markaana shaqallada kaabayaasha keligood laguma isticmaali karo jumladda. Waa in loogu adeegsadaa ficil caadi ah weedha si ay u badali karaan kacsiga ama macnaha falka dhabta ah.
Fikradaha kaalmooyinka kor ku xusan waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa ficilka caadiga ah.
Haddii loo isticmaalo ficil caadi ah markaa iyagu macno ayey leeyihiin kaligoodna waa loo isticmaali karaa. Waxaan arki doonnaa mowduuca fal-kaabe ah oo si faahfaahsan u sii kordhaya markay casharradeennu soconayaan.
Halkan waxaan ku siinaynaa macluumaad naxwe ahaaneed si aan wax uga qabanno qodobbada muhiimka ah.
Casharrada soo socda, waxaan sii wadi doonaa inaan sharaxno jumlada dhismaha ee leh qaabka naxwe ahaaneed mar kasta oo ka soo jeeda qaabka ugu fudud ee jumladaha ilaa jumladaha ugu adag.
dhammaan noocyada kala duwan su'aalo iyo jawaab-celin ku saabsan koorsooyinka our Jarmal almancax forums ama comments aan yazabilirsiniz.t su'aalaha ku lammaan waxaa ka jawaabi doono macallimiinta almancax.
Waxaan kuu rajeyneynaa guul dhamaantiin…
RISALE-I NUR'AN VECİZELERRugta nolosha waa yar tahay. Waxaa jira waxyaabo badan oo aad u baahan tahay.
Xigmaddu iyo xaqiiqada ah in nin loo diro dunidan; Waa in la aqoonsado Hâlik-y Kâinat oo rumaysto oo u caabudo.
Waxa ugu mahad naqayaa waa inaadan iloobin aakhiro aakhiro aduunkana adoome aakhiro aakhiro aduun.
Shaqada ugu muhiimsan ee Haatuf-i Rahman rabto cibaadadiisa waa mahadsan.
Falalkaaga, Riza-y waa inuu ahaado ilaah. Haddii uu wanaagsan yahay, markaa adduunka oo dhan maaha wax aan qiimo lahayn.
Dunidan waa taageere. kiiska ugu weyn waa inuu ku guuleysto adduunka dhabta ah. Haddii uusan qofku awoodin, kiisku wuu lumaa.
Ammaankoodii sharafeed, waxay ku jiraan xaalad dulmi ah waxayna ka soo guuraan halkan. Sidaa daraadeed maxkamad-keli ayaa tagay.
Sultan-i waa caalam ah, fure u tahay wax walba oo isaga ku, wuxuu qaaday kelyaha ee gacmaha wax walba.
WAA MAXAY TAHAY IN AAD KA QABTO NABA FADLAN WAXBARASHOWAA MAXAY WAA MAXAY YIRAAHAN? FADLAN WAXBARASHOSIDA CUSUB EE CIYAARAHA SIDA AAD KA QAYB QAATU DHISMAYSO FADLAN WAXBARASHOSida lagu soo sharxay in Directory of Youth, dhalinyarada shaki ku jirin tegi doonaa. Summer ee dayrta iyo jiilaalka, oo maanta iyo isbeddel ku kat'iyet fiidkii iyo habeenkii meel, dhalinyarada beddeli doonaa xitaa da 'weyn iyo dhimasho. Haddii uu dhimanaya iyo dhalinyarada transient jihada hayrata Dhawrsoon Inkastoo saadka ee aqalka isaga la weligiis, ku guuleysan doono Fadliga injiilka dhallinyaro ah oo ay siin this dhan ah amarrada samaawi ah.
Haddii isticmaalo sefahet Inkastoo, sida uu in daqiiqad ah, maxaa yeelay, cadho sheekada, million daqiiqo ayaa laga qaadayaa oo xarig ah, si aad u, dhallinyarada ee gay-i guryaha sharci Raalli ahaanshaha iyo dhadhan, hadda ka ahayn mes'uliyet iyo ka qabuuraha Faraha ka caddibaadda Eebe iyo ka hadhkii iyo dembiga iyo mücâzât dhaw ka, ayuu Sane in halkii ay ka tirtiraan ka dhadhan ah ee dhadhan isku caddaynayaa experiance kasta oo dhallinyaro ah.
Haddii jihada aqalka dhalinyarada aad u soo jiidasho iyo qurux tago barako-waxaan siin lahaa hay'ad samafal rabaani ah oo macaan oo xoog badan hab-i sida Aakhiro aad u dhalaalaya iyo dhalinyarada weligeed ah ay sabab u tahay, iyada oo aad u dirayaan Mahmud Quraanka gaar ahaan dhammaan buugaagta jannada iyo qaynuunnadiisa waxay na siin news wanaagsan. Haddii ay taasi waa run. Oo tan iyo waa ku filan goobo xalaal raaxaysi. Iyo saacad tan iyo farxaan Reebay ee aqalka, mararka qaarkood uu jiidayo hal sano oo xabsi toban sannadood ah '. Dabcan, sida duco mahadnaqid dhallinyarada, inay barakadii macaan ee isdhawrtay, si ay ugu bixinwaydeen jihada loo baahan yahay oo lagama maarmaan ah.
Tags: 10. caymiska naadiga fasalka, 10. fasalka nasiibka mawduuca, 9. fasalka Jarmalka, 9. fasalka nasiibka mawduuca, Jumlada Jarmalka, Jumlad Jarmal ah, Sida loo sameeyo jumlad jarmal, qaabka jumlada, alman cümleleri, sida loo dhiso jumlada
Waa maxay bisha Februar
Waa maxay bisha Januar
Fiidiyowyada barashada Jarmalka
Miraha iyo khudradda Jarmalka
Waa maxay bisha april
Waa maxay bisha september
Waa maxay bisha Oktoobar
Waa maxay maqaal?
Farqiga Jarmalka Konjunktiv 1 iyo Konjuktiv 2
Isku xirnaanta 2